Njikọ ụlọ akwụkwọ
Dịka ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ kwụụrụ onwe anyị, anyị maara nke ọma na anyị achọghị ịnọpụ iche. Ọ dị mkpa ka gị na ndị ọrụ ndị ọzọ na -arụkọ ọrụ ma mụta ihe. A na-akwado mmụta site na imekọ ihe ọnụ na ịkekọrịta omume ọma. Maka nke a, anyị emeela njikọ chiri anya na ndị a:
Njikọ ụlọ akwụkwọ nkuzi North West Kent
NWKTSA bụ nsonaazụ nke mmekorita dị n'etiti Dartford Grammar School na Wilmington Grammar School for Girls, ka ụlọ akwụkwọ mba abụọ nyere onwe ha 'ọkwa nkuzi' site na National College for Teaching and Leadership na June 2016.
Wentworth bụ akụkụ nke nkwekọrịta izizi ụlọ akwụkwọ nkuzi izizi yana nke a eritela uru nke ukwuu site na mwepụta nke mmekorita ahụ iji meziwanye ọmarịcha ogo nkuzi, idu ndú, mbanye na inweta ụmụ akwụkwọ. Nke a dị n'ime usoro nke usoro ụlọ akwụkwọ na-emezi onwe ya na nke ga-adigide.
Karịsịa anyị nwere ekele dị ukwuu maka nkwado na mmekorita ya na Dartford Grammar School nke nwere:
Anyị kwadoro nkuzi nkuzi asụsụ iji webata Japanese n'ime usoro ọmụmụ afọ 6 anyị.
Ekekọrịta egwu egwu na imekọ ihe ọnụ nzere Artsmark.
O kwere ka anyị sonye na mmemme onye nkuzi, na -enyere anyị aka inye aka zụlite ma zụlite ndị ọrụ anyị.
Enyere otu afọ nkuzi violin n'otu n'otu dịka akụkụ nke ọrụ Red Rooster site na Mick Jagger Center.
Dugara anyị n'ịsọ asọmpi n'asọmpi dịka akụkụ nke ụbọchị MCC ụlọ akwụkwọ ahụ.
Nweta mmepe ọkachamara nke ndị ọrụ.
Ihe ngwugwu nkwado zuru oke maka NQT n'ụlọ akwụkwọ.
Anyị na -atụ anya iwulitekwu njikọ na ọrụ ndị a.
Njikọ ụlọ akwụkwọ mpaghara Dartford (DASCO)
Anyị bụ ndị otu DASCO na -arụsi ọrụ ike na SLT na -aga nzukọ na nzukọ nzukọ.
Ndị ọrụ na -etinye aka na Math, Bekee, Sayensị, Kọmputa na otu egwu. Site na nke a, ewepụtala usoro ịgbakọ mgbakọ na mwepụ Dartford yana mmemme ọmụmụ ihe.
Onye Mmekọ nkwalite ụlọ akwụkwọ
Dị ka ezigbo ụlọ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ mmuta, anyị nwere ohere nleta ụbọchị abụọ site n'aka onye mmekọ imezi ụlọ akwụkwọ iji kwado nleba anya na nyocha nke anyị. Anyị azụtala oge ọzọ ịnata nleta ụbọchị atọ, otu kwa oge iji gbado anya na mmepe ụlọ akwụkwọ anyị. E jikwa oge a nye nkwado Gọvanọ. Ihe ngwugwu a na -ahụ na enwere ihe ịma aka na ọrụ anyị.
Ọzụzụ Kent na Medway
Biko pịa njikọ dị n'okpuru ka ilele vidiyo nkwado KMT.